iPhone တှနေဲ့ မပွီးဆုံးနိုငျသေးတဲ့ Battery Health ပွဿနာ |
Apple / iOS / iPhone / Knowledge
- July 13, 2020July 13, 2020 - Pyae Heinn Kyaw
ကြှနျတျောတို့ Facebook Group ထဲမှာ အမေးအမြားဆုံးနဲ့ ပွဿနာအမြားဆုံး Topic ကတော့ Battery Health အကွောငျးပဲဖွဈပါတယျ .. ahh here we go !! I’m tired of this s***t 😅
ပထမဆုံးသိထားရမှာက Battery Health ဆိုတာ သုံးလကေလြပေါပဲ .. Battery အသဈစကျစကျမှာတုနျးကပါလာတဲ့ mAh amount ဟာ သုံးတာကွာလာတာနဲ့အမြှ လြော့လြော့လာတတျပါတယျ .. Battery Health ဆိုတာ လကျရှိ Battery ရဲ့ ကနျြရှိနတေဲ့ mAh amount ဟာ Battery အသဈစကျစကျမှာပါလာတုနျးက mAh amount ရဲ့ ဘယျလောကျ ရာခိုငျနှုနျးပဲကနျြတော့တယျဆိုတာကို တှကျပွထားတာပဲဖွဈပါတယျ
ဒီကိစ်စက ရှငျးလရှေုပျလဗြေ .. ခငျဗြားတို့ရှငျးအောငျပွောရရငျဗြာ .. ခငျဗြားသူငယျခငျြးက6လအတှငျး Battery Health 5% ကတြယျဆိုရငျ ခငျဗြားက 10% ကခြငျြကမြယျ .. ဒါကဘာဖွဈလို့လဲဆိုတော့ User တယောကျနဲ့တယောကျ ဖုနျးကိုအသုံးပွုတဲ့ Behavior ခငျြးကှာလို့ပဲ
Apple ပွောကွားထားပုံအရ Cycle Count 500 ပွညျ့ရငျ Battery Health 20% ကတြယျလို့ဆိုပါတယျ .. Cycle Count အကွောငျးသခြောနားလညျခငျြရငျ ဒီ Post မှာသှားဖတျပါ – https://www.pyaeheinnkyaw.tech/battery-tips-iphone/
ဆိုလိုတာကဗြာ .. ခငျဗြားက တနမှေ့ာ 100% ကုနျအောငျသုံးမယျဆိုရငျ ခနျ့မှနျးခြေ 1 နှဈနဲ့4လအကွာမှာ Battery Health က 20% ကသြှားမယျ .. ဒါဟာပုံမှနျပါပဲ
ဒါက Technically အရ ဘယျအခြိနျမှာ ဘယျလောကျကသြှားမလဲဆိုတာတှကျပွထားတာနျော .. တကယျ့လကျတှမှေ့ာ အခုပွောထားတာနဲ့ ကှာခွားမှုရှိနိုငျတယျ .. ဘာဖွဈလို့လဲဆိုတော့ Battery တှဆေိုတာ အပူကွောကျတတျတဲ့ သတ်တဝါတှကေိုး .. သငျ့ဖုနျးကို ပူအောငျထားလေ Battery Health ကတြာမွနျလပေဲ
Battery ကိုဘယျလိုညှာညှာတာတာသုံးရမလဲဆိုတာကတော့ အပျေါက Link မှာပဲ တခါတညျးရှငျးပွထားတယျ ..အဲ့တာသှားဖတျကွညျ့လိုကျ
အပျေါက Link မှာပါတဲ့အခကျြတှအေပွငျ နောကျထပျသိထားရမှာတဈခုကတော့ Battery ဆိုတာ စကျပစ်စညျးပါ .. ခနျ့မှနျးလို့မရနိုငျပါဘူး .. ဒါကွောငျ့ကခြငျြရငျ ကပြါလိမျ့မယျ .. မကခြငျြရငျ မကပြါဘူး .. နားလညျလားတော့ မသိဘူး :3
ကိုယျတှဆေိုရငျ Cycle Count 465 ရှိနတောတောငျ Battery Health 91% အထိကနျြသေးတယျ .. ကိုယျကတော့ မွနျမွနျကစြခေငျြတယျ .. ဘာဖွဈလို့လဲသိလား? Apple က Warranty ကာလအတှငျး Battery Health 80% အောကျ ကသြှားရငျ (ဒါမှမဟုတျ) Battery မှာ Service ပွနရေငျ Battery ကို Free လဲပေးပါတယျ
Singapore က ကိုယျ့အသိတယောကျဆိုရငျ Warranty ကာလအတှငျး Battery Service ပွလို့ Apple Authorised Service Provider ဆီကိုသှားလိုကျတာ .. ဟိုက Battery လဲပေးလိုကျတာမဟုတျပဲ ဖုနျးအသဈတလုံးပါ ပွနျလဲပေးလိုကျတယျ .. မွနျမာမှာလဲ အဲ့လို Service မြိုးကို mCare Apple Authorised Service Provider က လုပျပေးနတေယျ
Battery Health ကွောငျ့ ပွာယာခတျနတေဲ့လူတှကေိုပွောခငျြတဲ့စကား
ခငျဗြားတို့ ဖုနျးဝယျတယျဆိုတာ ဖုနျးကိုခိုငျးဖို့မဟုတျဘူးလား .. ခုဟာက Battery Health ဆိုတဲ့ ကိနျးဂဏနျးလေးတခု မကဆြငျးဖို့အတှကျ ကိုယျ့ဖကျက ဖုနျးသုံးတဲ့ Behavior တှကေိုလျိုကျပွောငျးရမှာက မတနျဘူးလို့ မခံစားမိဘူးလား?
ပွောခငျြတာက ဖုနျးကို သုံးခငျြသလိုသာသုံး .. အားသှငျးရငျးဂိမျးဆော့မလား, ညအိပျတုနျး အားသှငျးထားမလား .. သုံးခငျြသလိုသာ သုံးကွဗြာ .. အခြိနျတနျရငျ Battery Health ကကလြာမှာပဲ .. 80% အောကျကသြှားရငျ Warranty ကနျြသေးလားတခကျြစဈကွညျ့ .. ကနျြသေးရငျ mCare မှာ Free သှားလဲ .. Warranty မကနျြတော့ရငျ Battery Service Fees 1 သိနျးကြျောလောကျပေးပွီး လဲလိုကျ .. ကဲ ဘယျလောကျစိတျခမျြးသာစရာကောငျးလိုကျလဲ (တခုတော့ရှိတယျ .. mCare မှာ Service လုပျခငျြရငျ Apple Authorised မဟုတျတဲ့ ဆိုငျတှမှော ဖှငျ့ပွီးမပွငျထားဖို့လိုတယျနျော)
တခုသတိထားရမှာက အားသှငျးရငျးဂျိမျးဆော့တဲ့ ကိစ်စ .. အားသှငျးရငျး ဂိမျးဆော့ရငျ ဖုနျးတှကေပူလာတတျတာ သဘာဝပဲ .. iOS ရဲ့ သဘောကိုက ဖုနျးတှအေပူလှနျကဲမှုမဖွဈအောငျ ထိနျးခြုပျပေးထားတယျ .. ဖုနျးတှအေရမျးပူလာရငျ Screen Brightness ကိုလြှော့ခပြဈတာမြိုး, Chipset ရဲ့ Performance ကိုလြှော့ခပြဈလို့ Game ထဲမှာ FPS တှကေပြွီး ထဈလာတာမြိုးတော့ ကွုံရတတျတယျ .. အဲ့တာမြိုးမကွုံခငျြရငျတော့ ဖုနျးအတှကျ Cooling Fan လေးဝယျပွီးဆော့ကွပေါ့
အခုဒီစာကိုရေးတာက ဖုနျးကိုခိုငျးဖို့ဝယျထားပွီး ဖုနျးကပွနျခိုငျးတာခံနရေတဲ့လူတှအေတှကျ ရေးထားတာဖွဈပါတယျ .. ကဲ ဒီလောကျဆို အသိတရားရလောကျပါပွီ :3
ကျွန်တော်တို့ Facebook Group ထဲမှာ အမေးအများဆုံးနဲ့ ပြဿနာအများဆုံး Topic ကတော့ Battery Health အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ် .. ahh here we go !! I’m tired of this s***t 😅
ပထမဆုံးသိထားရမှာက Battery Health ဆိုတာ သုံးလေကျလေပါပဲ .. Battery အသစ်စက်စက်မှာတုန်းကပါလာတဲ့ mAh amount ဟာ သုံးတာကြာလာတာနဲ့အမျှ လျော့လျော့လာတတ်ပါတယ် .. Battery Health ဆိုတာ လက်ရှိ Battery ရဲ့ ကျန်ရှိနေတဲ့ mAh amount ဟာ Battery အသစ်စက်စက်မှာပါလာတုန်းက mAh amount ရဲ့ ဘယ်လောက် ရာခိုင်နှုန်းပဲကျန်တော့တယ်ဆိုတာကို တွက်ပြထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်
ဒီကိစ္စက ရှင်းလေရှုပ်လေဗျ .. ခင်ဗျားတို့ရှင်းအောင်ပြောရရင်ဗျာ .. ခင်ဗျားသူငယ်ချင်းက6လအတွင်း Battery Health 5% ကျတယ်ဆိုရင် ခင်ဗျားက 10% ကျချင်ကျမယ် .. ဒါကဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ User တယောက်နဲ့တယောက် ဖုန်းကိုအသုံးပြုတဲ့ Behavior ချင်းကွာလို့ပဲ
Apple ပြောကြားထားပုံအရ Cycle Count 500 ပြည့်ရင် Battery Health 20% ကျတယ်လို့ဆိုပါတယ် .. Cycle Count အကြောင်းသေချာနားလည်ချင်ရင် ဒီ Post မှာသွားဖတ်ပါ – https://www.pyaeheinnkyaw.tech/battery-tips-iphone/
ဆိုလိုတာကဗျာ .. ခင်ဗျားက တနေ့မှာ 100% ကုန်အောင်သုံးမယ်ဆိုရင် ခန့်မှန်းချေ 1 နှစ်နဲ့4လအကြာမှာ Battery Health က 20% ကျသွားမယ် .. ဒါဟာပုံမှန်ပါပဲ
ဒါက Technically အရ ဘယ်အချိန်မှာ ဘယ်လောက်ကျသွားမလဲဆိုတာတွက်ပြထားတာနော် .. တကယ့်လက်တွေ့မှာ အခုပြောထားတာနဲ့ ကွာခြားမှုရှိနိုင်တယ် .. ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ Battery တွေဆိုတာ အပူကြောက်တတ်တဲ့ သတ္တဝါတွေကိုး .. သင့်ဖုန်းကို ပူအောင်ထားလေ Battery Health ကျတာမြန်လေပဲ
Battery ကိုဘယ်လိုညှာညှာတာတာသုံးရမလဲဆိုတာကတော့ အပေါ်က Link မှာပဲ တခါတည်းရှင်းပြထားတယ် ..အဲ့တာသွားဖတ်ကြည့်လိုက်
အပေါ်က Link မှာပါတဲ့အချက်တွေအပြင် နောက်ထပ်သိထားရမှာတစ်ခုကတော့ Battery ဆိုတာ စက်ပစ္စည်းပါ .. ခန့်မှန်းလို့မရနိုင်ပါဘူး .. ဒါကြောင့်ကျချင်ရင် ကျပါလိမ့်မယ် .. မကျချင်ရင် မကျပါဘူး .. နားလည်လားတော့ မသိဘူး :3
ကိုယ်တွေဆိုရင် Cycle Count 465 ရှိနေတာတောင် Battery Health 91% အထိကျန်သေးတယ် .. ကိုယ်ကတော့ မြန်မြန်ကျစေချင်တယ် .. ဘာဖြစ်လို့လဲသိလား? Apple က Warranty ကာလအတွင်း Battery Health 80% အောက် ကျသွားရင် (ဒါမှမဟုတ်) Battery မှာ Service ပြနေရင် Battery ကို Free လဲပေးပါတယ်
Singapore က ကိုယ့်အသိတယောက်ဆိုရင် Warranty ကာလအတွင်း Battery Service ပြလို့ Apple Authorised Service Provider ဆီကိုသွားလိုက်တာ .. ဟိုက Battery လဲပေးလိုက်တာမဟုတ်ပဲ ဖုန်းအသစ်တလုံးပါ ပြန်လဲပေးလိုက်တယ် .. မြန်မာမှာလဲ အဲ့လို Service မျိုးကို mCare Apple Authorised Service Provider က လုပ်ပေးနေတယ်
Battery Health ကြောင့် ပြာယာခတ်နေတဲ့လူတွေကိုပြောချင်တဲ့စကား
ခင်ဗျားတို့ ဖုန်းဝယ်တယ်ဆိုတာ ဖုန်းကိုခိုင်းဖို့မဟုတ်ဘူးလား .. ခုဟာက Battery Health ဆိုတဲ့ ကိန်းဂဏန်းလေးတခု မကျဆင်းဖို့အတွက် ကိုယ့်ဖက်က ဖုန်းသုံးတဲ့ Behavior တွေကိုလိုက်ပြောင်းရမှာက မတန်ဘူးလို့ မခံစားမိဘူးလား?
ပြောချင်တာက ဖုန်းကို သုံးချင်သလိုသာသုံး .. အားသွင်းရင်းဂိမ်းဆော့မလား, ညအိပ်တုန်း အားသွင်းထားမလား .. သုံးချင်သလိုသာ သုံးကြဗျာ .. အချိန်တန်ရင် Battery Health ကကျလာမှာပဲ .. 80% အောက်ကျသွားရင် Warranty ကျန်သေးလားတချက်စစ်ကြည့် .. ကျန်သေးရင် mCare မှာ Free သွားလဲ .. Warranty မကျန်တော့ရင် Battery Service Fees 1 သိန်းကျော်လောက်ပေးပြီး လဲလိုက် .. ကဲ ဘယ်လောက်စိတ်ချမ်းသာစရာကောင်းလိုက်လဲ (တခုတော့ရှိတယ် .. mCare မှာ Service လုပ်ချင်ရင် Apple Authorised မဟုတ်တဲ့ ဆိုင်တွေမှာ ဖွင့်ပြီးမပြင်ထားဖို့လိုတယ်နော်)
တခုသတိထားရမှာက အားသွင်းရင်းဂ်ိမ်းဆော့တဲ့ ကိစ္စ .. အားသွင်းရင်း ဂိမ်းဆော့ရင် ဖုန်းတွေကပူလာတတ်တာ သဘာဝပဲ .. iOS ရဲ့ သဘောကိုက ဖုန်းတွေအပူလွန်ကဲမှုမဖြစ်အောင် ထိန်းချုပ်ပေးထားတယ် .. ဖုန်းတွေအရမ်းပူလာရင် Screen Brightness ကိုလျှော့ချပစ်တာမျိုး, Chipset ရဲ့ Performance ကိုလျှော့ချပစ်လို့ Game ထဲမှာ FPS တွေကျပြီး ထစ်လာတာမျိုးတော့ ကြုံရတတ်တယ် .. အဲ့တာမျိုးမကြုံချင်ရင်တော့ ဖုန်းအတွက် Cooling Fan လေးဝယ်ပြီးဆော့ကြပေါ့
အခုဒီစာကိုရေးတာက ဖုန်းကိုခိုင်းဖို့ဝယ်ထားပြီး ဖုန်းကပြန်ခိုင်းတာခံနေရတဲ့လူတွေအတွက် ရေးထားတာဖြစ်ပါတယ် .. ကဲ ဒီလောက်ဆို အသိတရားရလောက်ပါပြီ :3
MacBook တှရေဲ့ FaceTime Camera ကို ဘာမှနဲ့မဖုံးအုပျထားဖို့ အကွံပေးလိုကျတဲ့ Apple